CreativeChain စျေး - အွန်လိုင်း CREA ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို CreativeChain (CREA)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ CreativeChain (CREA) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ CreativeChain ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $87 799.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ CreativeChain တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
CreativeChain များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
CreativeChainCREA သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0331CreativeChainCREA သို့ ယူရိုEUR€0.028CreativeChainCREA သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0253CreativeChainCREA သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0301CreativeChainCREA သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.295CreativeChainCREA သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.208CreativeChainCREA သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.73CreativeChainCREA သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.123CreativeChainCREA သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.044CreativeChainCREA သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0462CreativeChainCREA သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.729CreativeChainCREA သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.257CreativeChainCREA သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.18CreativeChainCREA သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.48CreativeChainCREA သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.5.6CreativeChainCREA သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0454CreativeChainCREA သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0507CreativeChainCREA သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.03CreativeChainCREA သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.23CreativeChainCREA သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3.53CreativeChainCREA သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩39.35CreativeChainCREA သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦12.8CreativeChainCREA သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.41CreativeChainCREA သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.906
CreativeChainCREA သို့ BitcoinBTC0.000003 CreativeChainCREA သို့ EthereumETH0.00009 CreativeChainCREA သို့ LitecoinLTC0.00061 CreativeChainCREA သို့ DigitalCashDASH0.000365 CreativeChainCREA သို့ MoneroXMR0.000372 CreativeChainCREA သို့ NxtNXT2.59 CreativeChainCREA သို့ Ethereum ClassicETC0.00489 CreativeChainCREA သို့ DogecoinDOGE9.57 CreativeChainCREA သို့ ZCashZEC0.000402 CreativeChainCREA သို့ BitsharesBTS1.02 CreativeChainCREA သို့ DigiByteDGB1.06 CreativeChainCREA သို့ RippleXRP0.118 CreativeChainCREA သို့ BitcoinDarkBTCD0.00114 CreativeChainCREA သို့ PeerCoinPPC0.11 CreativeChainCREA သို့ CraigsCoinCRAIG15.1 CreativeChainCREA သို့ BitstakeXBS1.41 CreativeChainCREA သို့ PayCoinXPY0.579 CreativeChainCREA သို့ ProsperCoinPRC4.16 CreativeChainCREA သို့ YbCoinYBC0.00002 CreativeChainCREA သို့ DarkKushDANK10.64 CreativeChainCREA သို့ GiveCoinGIVE71.8 CreativeChainCREA သို့ KoboCoinKOBO7.55 CreativeChainCREA သို့ DarkTokenDT0.0305 CreativeChainCREA သို့ CETUS CoinCETI95.75
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sat, 15 Aug 2020 07:30:02 +0000.